काठमाडौँ आसोज ३
“सूचनाको हक आम नागरिकका लागि भएता पनि यसको प्रयोग पत्रकार जगतलले आफ्नो समाचारलाई प्रमाणित गर्न सवैभन्दा बढि गर्नुपर्छ । नेपालका आमसञ्चार माध्यमले पूर्णरुपमा यसको प्रयोग गरेमा पत्रकारिता मर्यादित, सन्तुलित, तथ्यपरक र विश्वसनिय हुन्छ । ”
“मिडिया स्कूलद्धार आयोजित “नेपालको संविधान २०७२ र सूचनाको हक” विषयक अन्तर्कृया कार्यक्रममा सूचना आयोगका आयूक्त किरण पोखरेलले सो विचार व्यक्त गरेका हुन । आयूक्त पोखरेलले सार्वजनिक निकायमा पुरानै खालको मानसिकताको विकास र अभ्यास भएको हुनाले नेपालका सार्वजनिक निकायका कर्मचारीतन्त्रमा चेतना भएता पनि अभ्यास पूर्णरुपमा हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सूचनाको हक आम नागरिकको हक हो । जवसम्म नागरिक चेतनशिल हुँदैनन् तवसम्म यसको विकास सम्भव नभएको विचार राख्दै आयूक्त पोखरेलले अव विद्यालय र कलेज स्तरका पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश हुनलागेको जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झाले आज पहिलो जन निर्वाचित संविधानका पहिलो वार्ष पुरा भएको छ । त्यसैले अव जनस्तरसम्म यसको अभ्यास हुनु जरुरी छ । यो हकले भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण, सुशासन र जनमूखि प्रशासनको विकासमा मूख्य भूमिका खेल्ने विचार व्यक्त उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणका सञ्चालक समितिका बोर्ड सदस्य निमानन्द रिजालले नेपालमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै त्रि.वि.का पत्रकारिता विभागका प्रध्यापक डा. कुन्दन अर्यालले सूचनाको हकले नेपाली पत्रकारिता शिक्षामा आयाम थप्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रा.डा. लक्ष्मीकान्त पन्थीले गोरखापत्रको भूमिका नेपाली पत्रकारीताको विकासमा महत्पपुर्ण रहेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो । भारतको साइनाथ विश्वविद्यालयबाट नेपालमा सूचनाको हकको प्रयोगका विषयमा विद्यावारिधि गरिहेका मधुसुधन न्यौपानेले नेपालमा सूचनाको हकको अभ्यासको अवस्थाका वारेमा आफ्नो राख्नुभयो ।
सो अवसरमा मिडिया स्कूलद्धारा प्रकाशित अनुसन्धान मूलक लेखरहेको मिडिया जर्ननलको दोश्रो अंकको विमोजन भयो । मिडिया स्कूलका अध्यक्ष नवराज चालिसेले अव मिडिया स्कूलले अनुसन्धानमूलक कार्यलाई निरन्तरता दिदैँ अनुसन्धान प्रतिष्ठनका रुपमा यसलाई विकास गरिने जानकारी दिनुभयो ।